Luulyo | 2014 | WEEJIDOW
Archive for Luulyo, 2014
War deg deg ah: DAAWO: Dowlad Goboleedka Puntland oo xiriirka maanta u jartey Dowlada Federaalka si adagna uga soo horjeesatey Maamulkii shalay Muqdisho looga dhawaaqey isla markaana maanta ku amartay xildhibaanada iyo Wasiirada uga jira dowladda federalka inay ka soo tagaan oo ay si deg deg ku yimaadaan Puntland.
Luulyo 31, 2014
WAAJIDPRESS – 31 JUL 2014:
HOOS KA DAAWO: SHIRKII JARAA’ID EE MADAXWEYNAHA DOWLAD GOBOLEEDKA PUNTLAND:
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa ugu yeertay xubnaha kasoo jeeda deegaanadeeda ee uga jira dowladda federalka Soomaaliya inay muddo 15 cisho ah ku yimaadaan gudaha Puntland si ay wadatshi ula sameyso.
Go’aankaan ayaa ka dambeeyay shir deg deg ah oo galabtay galinkii dambe xarunta madaxtooyada ay ku yeesheen golaha wasiirada ee dowladda Puntland oo uu shir gudoominayay madaxweyne Gaas.
War-saxafaadeed kasoo baxay shirkaan oo uu saxaafada u aqriyay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdi-Welli Gaas ayaa wuxuu sheegay in dowladda Puntland ay gabi ahaanba xiriirkii ujartay dowladda federalka Soomaaliya, isla markaana waxa maamul ku sheega looga dhawaaqey Madaxtooyada Muqdisho aysan ahayn wax jira, Galkcayana ay ka tirsan Dowlad Goboleedka Puntland; ayuu yiri Madaxweynaha Puntland CabdiWelli Gaas.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan hishiiska maamulka u sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud oo uu ku sifeeyay inuu kasoo horjeedo dastuurka kmg ah ee Soomaaliya islamarkaana uu yahay xad gudub lagu sameynayo dhul kamid ah Puntland. Wuxuuna ku eedeeyay madaxda dowladda federalka Soomaaliya oo ah Madaxweyne Xassan Sheekh iyo Ra’isul Wasaare Cabdiwelli inay horseed ka noqdeen hishiis ka hor imaanaya dastuurka dalka; isla markaasna ay cadeysteen cadowtinimada ay u qabaan reer PUNTLAND; ayuu yiri Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland
Wuxuu sidoo kale madaxweynuhu ugu yeeray Caasho Geelle Diiriye oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka iyo wixii jago ka hayo Dowlada oo u dhashey deegaanadaan inay timaada Puntland, sidoo kale wuxuu yiri, waa in ay xubnahan amarkeena qaataan sidii hadda ka hor beesha DIGIL & MIRIFLE xildhibaanadooda iyo wasiiradooda u adeeceen Malaaqyadooda.
Ugu dambayn Madaxweynaha dowladd Goboleedka Puntland ayaa sheegtay inay ka xun tahay in beesha caalamku goob joog ka ahaadaan qorshihii Muqdisho shalay lagu gaaray, waxayna sheegtay wixii ka yimaada oo dhibaato ah inay dusha saarandoonto xukuumada Soomaaliya – HOOS KA DAAWO SHIRKII JARAA’ID EE UU MAANTA QABTEY MADAWEYNAHA DOWLAD GOBOLEEDKA PUNTLAND EE UU XIRIIRKA UGU JARAY DOWLADA FEDERAALKA IYO ISAGOO KA SOO HORJEESTEY MAAMULKII SHALAY MADAXTOOYADA MUQDISHO LOOGA DHAWAAQEY:
Daawo: Guddiga Qabanqaabada Mudaharaadka looga soo horjeedo imaatinka Madaxweyne Xasan ee gobolka Minnesota oo arrimo badan oo ku saabsan sababta loo dhigayo Mudaaharaadka si wanaagsan u qeexay
HOOS KA DAAWO: Guddiga Qabanqaabada Mudaharaadka (oo ka kooban dhamaan qabiilada Soomaalida ee 4.5) looga soo horjeedo imaatinka Madaxweyne Xasan ee gobolka Minnesota oo aad ugu diyaargaroobey kana arrimo badan ka hadley:
War deg deg ah: Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa kasoo horjeestay heshiiska maamul goboleedka loogu dhisayo gobolada Dhexe.
Madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb Cabdulaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa waxa uu maanta sheegay inuu kasoo horjeedo heshiis shalay lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho kaasoo maamul goboleed loogu dhisayo gobolada Dhexe, gaar ahaan goboalda Mudug iyo Galgaduud.
Mudane Baarleex ayaa ku eedeeyay dowlada federaalka Soomaaliya inay ka been abuurtay maamulkiisa iyo weliba saxiixiisa oo aysana jirin meel uu heshiiskii shalay ku saxiixay.
Dhanka kale madaxweynaha Ximin iyo Xeeb oo sii hadlayay mar uu maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inaysan qayb ka ahayn heshiiskii shalay lagu kala saxiixday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Somalia kaasoo ay wada saxiixeen maamulka Galmudug iyo weliba ururka Ahlusuna waljameeca.
Kadib markii uu madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb Cabdulaahi Cali Maxamed Baarleex sheegay inay kasoo horjeedaan heshiiskii shalay ayaa waxaa ma bilowday magaalada Cadaado oo xarun u ah maamulka Ximin iyo Xeeb dibadbaxyo ka dhan ah heshiiskii shalay ayada oo ay dadweyne fara badan iskusoo baxeen.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Oo Khudbad Ka Jeediyey Shir Looga Hadlayey Dardar gelinta Dimuqraadiyeynta Soomaaliya “SAWIRRO”
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa khudbad ka jeediyey shir looga hadlayey dardar gelinta Dimuqraadiyeynta Soomaaliyao ayadoo shirkanna ay ka qeybgaleen ergo ka badan 400 oo ruux.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo khudbad ka jeediyey shirka ayaa faah faahin ka bixiyey xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan shaqooyinkii uu qabtay Golaha Shacabka Soomaaliya mudada Labada sano ah ee uu jiro, daruufaha adag ee lagu shaqeynayo iyo halka la hiigsanayo oo ah in dalkan la gaarsiiyo sanadka 2016ka doorasho xor ah taasi oo uu xusay iney ka go’antahay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Somaliya oo safar kedis ah ku tagey Magaalada Garbahaarey
Suxufi ku sugan Magaalada Garbahaarey, ayaa Dhacdo.com u sheegay in ujeedada Madaxweynaha ee Garbahaarey ay la xiriirto, sidii uu ugu kuur-geli laheyd arrimo bini’aadanimo oo ka jirta Gobolka Gedo.
War CULUS : Cabdi nuurasiyaad oo muuqaal xun ka baxshay Heshiiska Gobollada Dhexe
Cabdi-Nuura Siyaad (OO ka soo jeeda BEESHA HABARGIDIR -CAYR), oo ka tirsan Siyaasiyiinta Somalia oo la hadlaayay Idaacada SKY ee Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in Heshiiska Maamulka loogu dhisaayo Gobollada Dhexe uu yahay mid aan laheyn miro dhal.
‘’Waa been abuur waxan aaminsanahay in Heshiiskaasi uu yahay mid aan waxba dhaamin kuwii hore,sida midka lagu DHOODHOOBAY Madaxtooyada OO ah kan 3-da GOBOL EE KOONFUR GALBEED IYO kuw kale OO uu XASSAN sheekh DHOODHOOBAY; waayo waxa uu u muuqda mid lagu indha sarcaadinaayo Soomaalida, waxaa jiro Beelo aan lagala tashan oo iyagu la rabo in loo taliyo mana soconeyso’’
Gudoomiyaha Golaha Guurtida oo Maanta Xil Ka Qaadis Ku Sameeyey Gudomiyaha Gobolka iyo Kan Degmada
Luulyo 30, 2014
WAAJIDPRESS – 30 Jul 2014:
Maamulka gobalka Bay iyo kan degmada Baydhabo ayaa maanta waxaa xilalka ka qaaday golaha guurtida ee Dowlad goboleedka Lixda gobol ee koonfur Galbeed, iyadoo lagu eedeeyay xil-gudasho la’aan iyo ku tagri falidda hantida.
Golaha guuratida Dowlad Goboleedka Lixda gobol ee Koonfur-galbeed ayaa maalmahan shirar ku lahaa Baydhabo, iyagoo ugu dambeyn maanta ku dhawaaqay inay xilalka ka xayuubiyeen guddoomiyihii gobolka Bay, Cabdi Aadan Hoosoow iyo guddoomiyaha degmada Baydhabo, Xasan Macallin (Biikole).
Waxgaradka ayaa waxay xilka guddoomiyaha gobolka Bay iyo kan degmada si KMG ah ugu dhiibeen taliyaha qaybta booliiska gobalka Bay, Col. Mahad C/raxmaan, waxaana hadalka sheegay guddoomiyaha golaha guurtada ee maamulka Koonfur-galbeed, Xasan Shure Maxamuud.
Sidoo kale, goobtaas ka hadlay malaaqa weyn ee gobalka Bay, Xasanoow Cumuroow oo sheegey in maamulka gobal iyo degmo inuu dhammaaday xilligoodii toddoba bilood ka hor, ayna ku dhaqaaqeen falal dhac dadweyne iyo hanti lunsasho ah, sidaas daraadeedna ay xilalka uga xayuubiyeen.
Goobta waxaa kaloo ku sugnaa dhammaan nabadoonnada Gobalka Bay iyo Warbaahinta gobalka ka howlgaasha.
Malaaq Xasan Shure Maxamuud ayaa sheegey in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo magacaabi doonaan maamulka cusub ee gobal Bay iyo sidoo kale kan degmada Baydhabo.
Mar warbaahintu ay weydiisey Malaaq Xasan Shurre inay awood u leeyahiin inay xilalka ka qaadaan mas’uuliyiinta gobolka iyo kan degmada oo ay horay u soo magacowday dowladda Soomaalia ayaa ku jawaabay.
“Guddoomiyaha gobolka iyo kan degmada markii xilalka looga magacaabay innaga ayaan u gudbinnay dowladda, haddana annaga ayaa ka qaadnay, waayo haddaan markii horeba magacownay, haddana waan ka qaadi karnaa.”
Dhanka kale, mas’uuliyiintii la sheegay in xilalka laga qaaday ayaa waxay sheegeen inaysan waxba kala socon xil ka qaadista lagu sameeyay, balse ay ka maqleen warbaahinta.
WAR DEG DEG AH: Maxaa hada ka socda Villa Somalia
Shir gaar ah oo u dhaxeeyo dhinacyo kala duwan, ayaa waxa uu xilligaan ka soconayaa Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia, iyadoo ay qayb ka yihiin wafuud caalami ah, oo uu horkacaayo Wakiilka Qaramada Midoobe ee Somaliya Amb. Nicholas Kay.
Shirka waxaa sidoo kale ku sugan Madaxweynaha, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya iyo wefdi ka ka kala socdo Maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunada Gobolada Dhexe, iyadoo la suggaayo wefdi ka socdo dhinaca Maamulka Ximin & Xeeb.
Dowladdu waxay wadaa qorshe ay Maamul ugu soo dhiseyso Gobolada Galgaduud iyo Koonfurta Mudug, wuxuuna Maamulku noqon doonaa mid Ku Meel Gaar (KMG) ah.
Dhinacyadaan, ayaa waxay wada saxiixi doonaan in la dhiso Maamulka KMG ah ee loo dhisaayo Gobolada Mudug iyo Galgaduud, iyadoo dhanka Galmudug uu u saxiixi doono Madaxweyne Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid).
Maamulka KMG ah ee la qorsheynaayo in loo dhiso Gobolada Galgaduud iyo Mudug, ayaa waxaa soo diyaariyay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, waxaana taageersan Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Xafiiska Qaramada Midoobe ee Somaliya.
Suxufiyiinta oo looga yeeray Villa Somalia, ayaa iminka dibad joog ka ah jirka, waxaase lagu wadaa in faah faahin laga siiyo kolka la soo gaba gabeeyo saacadaha soo socda.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Dr. C/weli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa wuxuu jimcihii sheegay in Maamul Kmg ah ay u dhisi doonaan Gobolada Galgaduud iyo Koonfurta Mudug.
War CULUS: Siyaasiyiin iyo Xildhibaano ka diggay Maamul Goboleed loo dhiso Gobolada Mudug iyo Galgaduud
Muqdisho – Iyadoo dhawaan uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, C.weli Sheekh Axmed Maxamed uu sheegay in Maamul Goboleed loo sameynayo Gobolada Mudug iyo Galgaduud islamarkaana Ra’iisul Wasaaraha uu carbaabay in dhisida Maamulkaasi loo xilsaaray Guddi heer Wasiir ah ayaa waxaa arintaasi si weyn uga soo horjeestay Siyaasiyiin iyo Xildhibaano ka soo jeeda Goboladaasi.
Maxamed Jaamac Labaale oo ka mid ahaa Xildhibaanada Baarlamaankii KMG ahaa oo la hadlay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wey ay uga diggayaan in Maamul Goboleed loo sameeyo Gobolada Mudug iyo Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya .
“Waxaan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya dhibaatada ka dhalankarta in Maamul Goboleed loo sameeyo Gobolada Mudug iyo Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya” ayuu yiri Xildhibaan Labaale.
Dhawaan ayey aheyd markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya C.wali Sheekh Axmed Maxamed uu ku dhawaaqay in Maamul Goboleed loo dhan yahay loo sameyn doono Gobolada Mudug iyo Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya.
Prof. Gandi oo shaaciyey in ay billaabeen qorshe Muqdisho looga wareejinaya caasimadda SOOMAALIYA
Xildhibaanno ka tirsan baarlamanka Soomaaliya, ayaa billaabay qorshe ay doonayaan in caasimadda Soomaaliya iyo dowladda federaalkaba laga wareejiyo magaalada Muqdisho, kadib dilkii Saado Cali Warsame.
Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey xildhibaan Maxamed Cabdi Gaandi, oo ka tirsan baarlamanka, kadib wareysi uu bixiyey oo uu kaga hadlay dilkii Saado Cali Warsame.
Gaandi waxa uu xaqiijiyey in isaga iyo xildhibaanno badan ay billaabeen ka fekeraka in magaalo kale dowladda ay u guurto, sababtuna waxa uu ku sheegay in ammaankii Muqdisho la sugi waayey.
Haddii aminigii Muqdisho la sugi waayey, waxaan go’aan ku gaarno inaan ka fekerno in magaalo kale loo raro dowladda, waayo ma ahan in dowladda ay u xayirnaato Muqdisho” ayuu yiri Gaandi oo la hadlay website laga lee yahay Puntland.
Sida ilo xog-ogaal ah ay u sheegeen Caasimada Online, waxaa qorshahan intiisa badan wada xildhibaannada beelaha Daarood, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Puntland iyo kuwa Gaandi ku reerka ah.
Gaandi waxa uu sheegay in si gaar ah loo beegsanayo dadka hadallada adag lagu yaqaan ee ka hadlay marxaladaha siyaasadeed ee dalka.
Inkasta oo Gaandi uu qiil ka dhigtay amni darrada Muqdisho, haddana qorshahan waxa uu ahaa mid muddo ay ololeenayeen.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Luulyo, 2014.